Wararka - Maxay yihiin kala saarida kubbadaha birta kaarboon?
1. Sida laga soo xigtay maaddada, wuxuu u qaybsan yahay kubadaha birta kaarboon yar, kubadaha birta kaarboon dhexdhexaadka ah, kubbadaha birta sare leh, waxyaabaha ugu muhiimsan waa 1010-1015, 1045, 1085, iwm;
2. Marka loo eego adkaanta, waxaa loo qaybiyaa kubbadaha jilicsan iyo kubadaha adag, taas oo ah in la xukumo haddii daaweynta kuleylka loo baahan yahay: adkaanta ka dib daaweynta kuleylka ayaa kordheysa, oo ku saabsan HRC60-66, oo badanaa loo yaqaan kubbadaha adag ee warshadaha; adkaanta adigoon daaweyn kuleylka ayaa hooseysa, qiyaastii HRC40-50, oo badanaa loo yaqaan kubbadda jilicsan ee warshadaha;
3. Iyadoo la raacayo haddii la safeeyey iyo in kale, wuxuu u qaybsan yahay kubbadda madow iyo kubbadda dhalaalaysa, taas oo ah, kubbadda hoose ee wax shiidaya lama nuujin, taas oo badanaa loogu yeero kubbada madow ee warshadaha; dusha sare ee dhalaalaya ayaa u dhalaalaya sida dusha muraayadda, oo badanaa loo yaqaan kubbadda dhalaalaysa ee warshadaha;